Jaaliyadda Holland oo martiqaad gaar ah u samaysay orodyahan Cabdi Nageeye [Sawirro] - Somnieuws.com
Xubno ka tirsan Jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan Nederlands ayaa maanta munaasabad qada sharaf ah ugu sameeyey Magaalada Utrecht, ee dalkaasi Cabdi Nageeye oo ah orodyahan Soomaali ah oo guul taariikhi ah ka soo hoyay tartankii orodka Maarathonka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey Magaalada Tokiyo ee dalka Japan.
Cabdi Nageeye oo u ordayay dalka Nederlands ayaa kaalinta 2-aad ka galay orodka dheereeya, isaga oo ku guuleystay biladda qalinka.
Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen shaqsiyaad hormuud u ah jaaliyadaha Soomaalida waxaa dadkii ka soo qeybgalay heeso waddani & qaraami isugu jira ku madadaalinayay fannaan Cabdi Baadil, isaga oo hees gaar ah oo uu u sameeyey orodyahan Nageeye madasha ka qaaday.
Guddoomiyaha ururka Hirda Marwo Faaduma Faarax oo ahayed shaqsigii munaasabada soo qabanqaabisay ayaa ugu horreyn munaasabada ka hadashay, waxayna u mahadcelisay orodyahan Nageeye sida uu calanka & magaca Soomaali intaba kor ugu qaaday, iyada oo ku boorisay inuu dedaalka halkiisa ka sii wado, ayna u rajeyneyso in mustaqbalka dhow uu ku guuleysan doono billado kale.
“Nageeye guushiisu annaga oo dhan ayeey ina taabatay, ma aheyn guul qura, waxay ahayd isaga oo guuleystay iyo isaga oo caalamka tusay markii uu daqiiqadihii u dambeeyey ee guushiisa uu dhiirageliyey Bashiir oo isagana Soomaali ahaa una tartamayay Biljamka, galay na kaalintii 3-aad; sawirka halkaasi laga qaadan karay wuxuu ahaa mid muujinaya dadka Soomaalidu in ay yihiin dad is-caawiya weliba xilliyada adag” Ayeey tiri Faadumo Faarax.
Yasmin Alas, oo dadkii madasha ka hadlay ka mid ahayd waxay si qiiro leh ugu mahadcelisay Cabdi Nageeye, iyada oo ku tilmaantay inuu tusaale fiican [rol-model] u yahay dhalinyarada kale ee Soomaalida
“Waan jiriricooday markii aan arkay sida aad u caawisay walaalkaa, ma jirto xilliyadaas oo kale cid is xasuusan karaysa, qof kastaba isaga ayaa harjad ku jira inaad walaalkaa gacan u fidiso waxaad na tustay Soomaalinimo, waan kugu han-waynahay” Ayeey tiri Yasmin Aalas, waxayna ku dhiiragelisay inuu dedaalkiisa halkaa ka sii wado.
Yasmin Alas waxay qadka taleefanka soo gelisay orodyahan Cabdi Bile Cabdi oo ah orodyahan caan ka ah gayiga Soomaaliya, kuna guuleystay tartankii olombikada sannadkii 1987-dii isaga oo galay kaalinta 1-aad.
Cabdi Bile, ayaa kula dardaarmay orodyahanka Nageeye inuu dedaalka halkiisa ka sii wado, isuna diyaarayo sidii guulo hor leh ugu tillaabsan lahaa.
Zahra Naaleeye, oo ka mid ah hormuudka Soomaalida Nederlands, una qaabilsan dalladda FSAN ololaha ka hortagga nuuc kasta oo gudniinka gabdhaha, oo madasha ka hadashay waxay codkeeda ku biirisay taageerada Nageeye.
Zahra waxay sheegtay in guri kasta oo ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nederlands inay gaartay guusha Nageeye.
“Guusha uu gaaray Nageeye waa mid annaga oo dhan aan ka faaneyno, isagana waxaan u rajeynayaa inuu dedaalka halkiisa ka sii wado” Ayeey tiri Zahra.